Kpochapụwo ntutu ahịhịa
Detangler ntutu ahịhịa
Nkata ahịhịa kwushin ntutu
Gburugburu ọkachamara igbu ihicha ntutu ahịhịa
Ejiji ntutu ọhụrụ kachasị ewu ewu
Obere ntutu ntutu
Osisi na achara ntutu ahịhịa
Osisi ntutu ahịhịa
Achara ntutu ahịhịa
Isiokwu: Na ntanetị na Amazon
site ha na 20-11-14
Isiokwu: On Line sales na Amazon Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. -onye nke isi na-eduga ntutu ntutu isi na China. Amazon-otu n'ime ndị na-ere ahịa n'ịntanetị kachasị ibu n'ịntanetị. Kemgbe 2018, ụlọ ọrụ anyị emeela ahịa e-commerce nke Amazon na-ejikwa nke ya ...
Isiokwu: Ihe ohuru-Bamboo Fiber brush / Straw Brush
Isiokwu: Ihe ohuru-Bamboo Fiber brush / Straw Brush No plastic, no wood, no metal. Ningbo Yongsheng ahịhịa Co., Ltd. ka ọma etinyere a ọhụrụ ihe onwunwe - Biomass mejupụtara ihe onwunwe. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke na-eguzogide ọgwụ nke nwere ihe macromolecular na biomass materia ...
Isiokwu: robịarute ọgụgụ isi (AI)
Isiokwu: Na-abịaru Artificial Intelligence (AI) EE, AI na-eru nso! N'ihi ihe isi ike na-ewe ndị ọrụ, ọkachasị mmetụta nke ọrịa ahụ na 2020.Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. agbaala nnukwu mbọ iji zụlite teknụzụ AI na imepụta ihe. N'oge a, ọtụtụ n'ime inje ...